नर्सिङ क्षेत्रमा पुरुष आउँदा असान्दर्भिक हुँदैन : गोमादेवी निरौला श्रेष्ठ [अन्तर्वार्ता]
असार १३, २०७५ बुधवार ०६:००:०० प्रकाशित
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले यो शैक्षिक सत्रदेखि नर्सिङमा पुरुषले पनि अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यो निर्णयलाई धेरैले स्वागत गरेका छन्। पुरुष नर्सको व्यवस्थापछि के फाइदा हुन्छ? किन यत्तिका वर्षपछि यसको अवधारणा आयो? यिनै विषयको सन्दर्भमा नेपाल नर्सिङ परिषदकी अध्यक्ष प्रा गोमादेवी निरौला श्रेष्ठसँग स्वास्थ्यखबरका लागि बुनु थारुले गरेको कुराकानीः
२३ वर्षअघि पनि पुरुष नर्सको अवधारणा आइसकेको रहेछ, तर रोकिएको उक्त कार्यक्रम फेरि कसरी ब्युँतियो?
२३ वर्षअघिको समाज र अहिलेको समाजमा धेरै रुपान्तरण भइसकेको छ। पहिला पुरुष नर्सिङको पढाइ किन रोकियो भन्ने यकिन कारण त थाहा भएन, तर अहिले फेरि यो निर्णय आएको छ। अहिले आवश्यकता किन पर्यो, भने राज्यको नीति-नियममा कुनै पनि क्षेत्रमा लैङ्गिक विभेद हुनु हुँदैन भन्ने कुरा उल्लेख छ।
पहिले पास गरेर गएका पुरुष नर्सहरुबाट नर्सिङ अध्ययन पुरुषका लागि पनि हुनुपर्छ भन्ने आवाज आइरहेको थियो। धेरै पुरुषहरु नर्सिङ अध्ययनका लागि नेपालमा नपाएर भारत तथा अरु देशमा गइरहेका छन्। हरेक क्षेत्रमा महिला र पुरुष बराबरी भन्ने तर नर्सिङ क्षेत्रमा मात्रै किन पुरुष नसमेट्ने, किन विभेद गर्ने भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर यो निर्णयको टुंगोमा हामी पुग्यौं।
अस्पतालमा पुरुष नर्स हुँदा के फाइदा पुग्छ?
अस्पतालमा सबै किसिमका बिरामी आउँछन्। महिला र पुरुष दुवै। पुरुषलाई कतिपय सेवा दिने क्रममा महिला नर्सहरु आफूलाई सहज महसुस गर्न सक्दैनन्। सोही कुरा पुरुष बिरामीको हकमा पनि लागू हुन्छ।
एउटा सानो उदाहरण हेर्नुस्, जस्तै: पुरुषको पिसाबनली फेर्ने अवस्था। त्यो अवस्थामा महिला नर्सहरु अलि असहज मान्छन्। उनीहरु डाक्टरलाई गर्दिनुस् न भनेर भन्नुपर्ने अवस्था छ।
अर्को कुरा, महिला नर्सहरुको पनि त प्रजनन अधिकार हुन्छ। वार्डमा काम गर्ने विवाहित नर्सहरुको सन्दर्भमा कुरा गर्दा एकचोटि बच्चा जन्माएपछि कम्तीमा ६ महिना बिदा बस्नुपर्ने हुन्छ। उक्त समयमा बिदा व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। कुनै विकट भौगोलिक क्षेत्रमा जाँदा पनि महिलाभन्दा पुरुषलाई अलि सहज महसुस हुन्छ। त्यसैले पनि अस्पतालमा महिला र पुरुष दुवै नर्सको आवश्यकता छ। दुवैको आवश्यकता र महत्व आआफ्नो ठाउँमा छ।
नेपालको सन्दर्भमा पुरुष नर्स कत्तिको व्यावहारिक होलान् भन्ने लाग्छ?
विकसित मुलुकहरु अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा लगायतमा पुरुष नर्सहरु छन्। अफगानिस्तान जस्तो मुस्लिम देशमा पनि पुरुष नर्सहरु छन्। विश्वका अरु देशमा भइरहेको छ भने नेपालमा नहुने त कुरै छैन। डाक्टरी क्षेत्रमै धेरै पुरुषहरु स्त्रीरोग विशेषज्ञ भएका छन् भने फार्मेसी पढ्नेहरु पनि पुरुष र महिला दुवै हुन्छन्। अरु प्राविधिक विषयमा दुवै महिला र पुरुष नै छन्। त्यस अर्थमा नर्सिङ शिक्षामा मात्र किन पुरुष नहुने त? पुरुषहरुले राम्ररी स्याहार-सुसार गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। विदेशमा पनि यसको राम्रो माग छ।
मेडिकल लाइनका सबै क्षेत्रमा पुरुष र महिला छन् भने नर्सिङ क्षेत्रमा पनि पुरुष आउँदा असान्दर्भिक हुने पटक्कै देख्दिनँ। पुरुषहरु पक्कै पनि नेपालको नर्सिङ क्षेत्रमा व्यावहारिक हुनेछन्।
नेपालको नर्सिङ क्षेत्रमा हत्तपत्त काम नपाउने र पाए पनि पारिश्रमिक ज्यादै न्यून हुने जस्ता विभिन्न समस्या देखिने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा पुरुषहरु नर्सिङ पढाइप्रति इच्छुक देखिएलान् त?
पुरुषहरु नर्सिङ पढ्न तयार छन्। किनभने आमनागरिकले पुरुष नर्सको आवश्यकता देखाएका छन्। हामीले पुरुष नर्सहरु थप्न लागेका होइनौं, महिलाहरुसँगै प्रतिस्पर्धा गरेर आउने कोटा दिन लागिएको मात्र हो। जस्तै: ४० जनाभित्र १५ प्रतिशत हो भने ६ जना पुरुषले नर्सिङ पढ्न पाउँछन्।
समस्या त हरेक क्षेत्रमा हुन्छ। सबै क्षेत्रमा समान गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। पुरुषहरु आफैंले इच्छा गरेकाले पढ्न पक्कै पनि रुचि राख्नेछन्। सेवाको भावना लिएर पुरुषहरु पढ्न इच्छुक देखिए भने यसले निरन्तरता पाउँछ।